कहिले लिन्छन् बिराटले क्रिकेटबाट सन्यास ? किङ कोहलीले क्रिकेटबाट सन्यासबाे पहिलो पटक यस्तो भने... - News20 Media
कहिले लिन्छन् बिराटले क्रिकेटबाट सन्यास ? किङ कोहलीले क्रिकेटबाट सन्यासबाे पहिलो पटक यस्तो भने…
February 19, 2020 February 19, 2020 N20LeaveaComment on कहिले लिन्छन् बिराटले क्रिकेटबाट सन्यास ? किङ कोहलीले क्रिकेटबाट सन्यासबाे पहिलो पटक यस्तो भने…
काठमाडौं, फागुन ७ : भारतीय क्रिकेट टिमका कप्तान विराट कोहलीले अझै तीन वर्ष क्रिकेटका तीन वटै फर्म्याट खेल्ने बताएका छन्। शुक्रबारबाट सुरु हुने न्यूजिल्याण्डविरुद्धको टेस्ट सिरिजअघिको पत्रकार सम्मेलनमा कोहलीले आगामी तीन वर्ष तीनवटै फर्म्याटमा सक्रिय रहने बताएका हुन्। तीन वर्षपछि आफ्नो ‘वर्कलोड’ को विचार गरेर कुनै एक फर्म्याट छोड्नेबारे सोच्ने कोहलीले बताए। यो तीन वर्षको बीचमा टि–२० र एकदिवसीय विश्वकप हुने भएकाले कोहली आफ्नै नेतृत्वमा विश्वकप ट्रफी उचाल्न चाहन्छन्।
सन् २०२१ मा भारतमै आयोजना हुने टि–२० विश्वकपपछि क्रिकेटको एक फर्म्याट छोड्नुहुन्छ? भन्ने प्रश्नमा कोहलीले भनेका छन्, ‘मेरो नजर ठूलो तस्वीरमा छ। त्यसका लागि म अगामी तीन वर्षका लागि आफूलाई तयार गरिरहेको छु। त्यसपछि सायद म अलग कुरा गर्छु।’
‘जब मेरो शरीरले दबाब झेल्न सक्दैन, म ३४-३५ वर्षको हुन्छु। तब म यस विषयमा सोच्छु। आगामी २–३ वर्षमा मलाई केही समस्या छैन,’ कोहलीले भने, ‘म यस्तै जोशका साथ खेल्न सक्छु। र, मलाई थाहा छ २–३ वर्ष टिमलाई मेरो जुरुरत छ।’
कप्तान कोहलीले थकाइ र समय व्यवस्थाबारे खुलेर कुरा गरेका छन्। ‘करिब ८ वर्षदेखि म तीन सय दिन क्रिकेट खेलिरहेको छु,’ कोहलीले भने, ‘हरेक पटक उस्तै जोशका साथ मैदानमा उत्रिरहेको छु। यसले आफैंलाई दबाब दिन्छ।’ ब्यस्त तालिकाका बीच बिदामा रहँदा खेलाडीलाई फाइदा हुने पनि कोहलीले बताए। कोहलीले तीनै फम्र्याटमा सक्रिय खेलाडीका लागि बीच–बीचमा आराम आवश्यक रहेको बताए।
‘हामीबीचमा व्यक्तिगत रुपमा बिदा त लिन्छौं, तर कहिलेकाहीँ खेल तालिकाले तपाईंलाई यस्तो गर्न दिँदैन। तीनै फम्यार्टमा खेल्ने खेलाडीका लागि आराम अति आवश्यक छ,’उनले भने।
गिरिजाप्रसाद कोइराला स्मृति गोल्डकपको उपाधि बिराटनगरलाई
दोस्रो संस्करणको गिरिजाप्रसाद कोइराला स्मृति गोल्डकप फुटबल प्रतियोगिताको उपाधि बिराटनगरले जितेको छ । फाइनल खेलमा विराटनगरले बारालाई शुन्यका विरुद्ध एक गोलले पराजित गर्दै उपाधि हात पारेको हो । इनरुवा खेल मैदानमा टिमका लागि जित दिलाउन बिन्धवासिनी फुटबल क्लब बिराटनगरका खेलाडी सम्राटले निर्णायक गोल गरे । वीरगञ्ज युनाइटेड बारालाई पराजित गर्ने क्रममा अफ्रिकन मुलका खेलाडी सम्राटले दोस्रो हाफको २८ औं मिनेटमा गोल गरेका थिए ।
निकै नै प्रतिष्पर्धात्मक खेलमा सम्राटले बाराका खेलाडी र किपरलाई डीबक्समा झुक्याउँदै हेडिङ मार्फत गोल गर्न भ्याए । त्यसपछि दुवै टिमबाट गोल हुन सकेन र एक शुन्यको नतिजा निकाल्दै बिराटनगरले उपाधि चुम्यो । खेलमा बाराले केहि राम्रा मुभहरु सिर्जना गरेपनि त्यसलाई गोलमा परिणत गर्न भने सकेन । भाग्यले समेत साथ नदिदा केहि गोलका अवसर बाराले गुमाउनु परेको थियो । खेलमा बिराटनगरले समेत गोल अन्तर बढाउने केहि अवसर गुमाएको थियो ।
प्रतियोगिताको उपाधिसँगै बिराटनगरले शिल्डसहित नगद २ लाख हात पारेको छ । उपबिजेतामा सीमित बाराले नगद १ लाख पाएको छ । फाइनल खेलको म्यान अफ द म्याच गोलकर्ता सम्राट घोषित भए । त्यसैगरी उत्कृष्ट गोलकिपर बिराटनगरकै पूर्ण चेम्जोङ चुनिए । मिड फिफेन्डर तर्फ बाराका सागर चौधरी उत्कृष्ठ हुन सफल भएभने वेस्ट डिफेन्सको पुरस्कार बाराकै मनोज चौधरीले हात पारे ।
त्यसैगरी उच्च गोलकर्ताको पुरस्कार बेलबारीका अरुण लिम्बुले प्राप्त गर्दा म्यान अफ द सिरिज बिराटनगरका खेलाडी धुव्र राई चुनिएको बब्लु भगतले जानकारी दिए । बिजेता टिम तथा खेलाडीलाई नगरप्रमुख राजन मेहता, उपप्रमुख जमुना गौतमसहित वडाध्यक्ष लगायतका जनप्रतिनिधिका साथै खेलसँग समवन्धित पदाधिकारी र आयोजक संस्थाका अध्यक्ष ईश्वर बराल लगायतकाले पुरस्कार वितरण गरेका थिए ।
८ टिम सहभागी जीपी गोल्डकपको दोस्रो संस्करणको फुटबल प्रतियोगितालाई इनरुवा नगरपालिका र प्रतिविम्ब नेपाल इनरुवाले संयुक्त रुपमा सञ्चालनमा ल्याएको थियो ।
एथ्लेटिक्स प्रतियोगितामा १६ नगरपालिकाको सहभागिता
भक्तपुर नगरपालिकाले यही फागुन ८ गतेदेखि १२ गतेसम्म अन्तरनगर एथ्लेटिक्स प्रतियोगिता आयोजना गर्ने भएको छ । नगरपालिकाद्वारा आज आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा भक्तपुर नपाका प्रमुख सुनिल प्रजापतिले प्रतियोगितामा १६ वटा नगरपालिकाले भाग लिने र प्रतियोगिताको सबै तयारी पूरा भएको बताउनुभयो ।
अन्तरनगर एथ्लेटिक्स प्रतियोगितामा घोराही उपमहानगरपालिका, ललितपुर महानगरपालिका, चाँगुनारायण नगरपालिका, रामेछाप नगरपालिका, कीर्तिपुर नगरपालिका, शङ्खरापुर नगरपालिका, मनोहरा कागेश्वरी नगरपालिका, मध्यपुरथिमि नगरपालिका, चौडण्डीगढी नगरपालिका, टोखा नगरपालिका, भक्तपुर नगरपालिका, साँगाचोक चौतारागढी नगरपालिका, मन्थली नगरपालिका, भरतपुर महानगरपालिका, रत्ननगर नगरपालिका र विदुर नगरपालिको सहभागिता रहनेछ ।
प्रतियोगितामा फिल्ड इभेन्ट्सअन्तर्गत सटपुट, लङ जम्प, ज्याभलिन थ्रो, डिसक्रस थ्रो, हाइ जम्प, ट्रिपल जम्प र ट्रयाक इभेन्ट्सअन्तर्गत १०० मिटर, २०० मि, ४०० मि, ८०० मि, १५०० मि, ५००० मि, १०००० मि, ४२।१९५ किमी ९म्याराथुन०, २१।०९ किमी ९हाफ म्याराथुन० खेल समावेश छन् ।
त्यस्तै फिल्ड इभेन्ट्समा प्रथम हुनेलाई रु पाँच हजार, दोस्रो हुनेलाई तीन हजार, तेस्रो हुनेलाई रु दुई हजार, ट्रयाकतर्फ प्रथम हुनेलाई रु पाँच हजार, दोस्रो हुनेलाई रु तीन हजार, तेस्रो रु दुई हजार नगद पुरस्कार दिनेछ । म्याराथुनमा प्रथम हुनेलाई रु ३० हजार, दोस्रो हुनेलाई रु २० हजार तेस्रो हुनेलाई रु १० हजार, हाफ म्याराथुनमा प्रथम हुनेलाई रु। ३० हजार, दोस्रो हुनेलाई रु २० हजार, तेस्रो हुनेलाई रु १० हजार नगद पुरस्कारबाट पुरस्कृत गरिनेछ । अन्तरनगर एथ्लेटिक्स प्रतियोगिताको रु ३० लाख खर्च हुने अनुमान गरिएको नगरप्रमुख प्रजापतिले जानकारी दिनुभयो । रासस
एभोकाडो : जसले हृदया*घात, मधुमेह, कब्जियत र हड्डी खिइँने समस्या हुन दिँदैन!
पीएसजी च्याम्पियन्स लिग क्वाटरफाइनलमा प्रवेश, नेयमार नायक बने
March 12, 2020 March 12, 2020 N20
पाकिस्तानी यी स्टार खेलाडीले टि-ट्वान्टी विश्वकपपछि अन्तराष्ट्रिय क्रिकेटबाट सन्यास लिने
January 18, 2020 N20
प्रतिबन्धमा परे पाकिस्तानी क्रिकेटर उमर अकमल
February 21, 2020 N20